Vaovao - Ny tanànan'i Jinjiang Neikeng dia nahazo ny anaram-boninahitra hoe "Tanànan'ny kiraro Shinoa, Tanànan'ny Slippers"
Ny tanànan'i Jinjiang Neikeng dia nahazo ny anaram-boninahitra hoe "Tanànan'ny kiraro Shinoa, Tanànan'ny Slippers"
Nahazo ny Lohatenin'ny Tanànan'i Jinjiang Neikeng “Sinoa Smilina fiavana karazany City, Slippers Tmanokana”
Vao tsy ela akory izay, nanambara tamin'ny besinimaro ny fikambanan'ny hoditra sinoa fa ny lohatenin'ny faritra mampiavaka ny “tanàna kiraro sinoa, tanàna slippers”. an'ny Jinjiang Tanànan'i Neikeng , IZA isalasalana fa mitaona Jinjiang indostrian'ny kapa a lot ao am-po. “Voninahitra sy andraikitra ho an’ireo izay niasa mafy nandritra ny am-polony taona maro ny nahafantarana azy tamin’ny farany. “Slippers kely tontolo lehibe,Jinjiang Ny indostrian'ny slippers dia hanararaotra io fotoana io mba hanatsarana ny rafitra indostrialy, hampitombo ny fampiasam-bola amin'ny siansa sy ny teknolojia ary hampiroborobo Jinjiang kapany orinasa mba hanitatra sy hanatsara kokoa. ” Izany no feo niraisan'ny indostria.
Inona no atao hoe ody Jinjiang Tanànan'i Neikeng tsy maintsy hahatratra izany voninahitra izany ? SY ahoana no hatao Jinjiang indostrian'ny slippers manao “hazo tranainy(Industria famokarana nentim-paharazana)” misokatra “ voninkazo vaovao(fanavaozana vaovao)“? Ary ahoana no hatao “Tanànan'ny kiraro kiraro any Sina -Neikeng” mpiasa mifandraika amin'ny vondrona fanombanana SY Jinjiang indostrian'ny slippers insiders view Jinjiang indostrian'ny kapa?
Inona no atao hoe ody Jinjiang Tanànan'i Neikeng tsy maintsy hahatratra izany voninahitra izany ?
"Tanànan'ny kiraro sy ny tanànan'i Slippers" any Shina ny anaram-paritra mampiavaka azy Jinjiang taorian'ny “Tanànan'ny kiraron'i Shina”, “Tanànan'ny akanjo fialam-boly any Shina”, “Tanànan'ny zipper ao Shina”, “Tanànan'ny indostrian'ny akanjo fitondra any Shina”, voninahitra “marika nasionaly” hafa.
Araka ny filazan'ny ekipan'ny fanombanana, "vokatry ny cluster mibaribary, rojo indostrialy feno" no antony lehibe indrindra Jinjiang mba hahazoana ny ambony.
Jinjiang tanàna no lohalaharana ao amin'ny faritanin'i Fujian hanangana ny faritra ara-toekarena eo amin'ny morontsiraka andrefan'ny andilan-tany. Io no distrika sy tanàna manana tanjaka feno matanjaka indrindra ao amin'ny Faritanin'i Fujian, ary iray amin'ireo distrika sy tanàna mandroso indrindra ao Shina. Nanangona andiana vondrona indostrialy mahazatra miaraka amin'ny toekarena tsy miankina ho toy ny tena fototra, toy ny fanenomana kiraro, lamba sy akanjo, fananganana seramika, sakafo sy zava-pisotro, elo ary kilalao. Ny tompon'andraikitra tompon'andraikitra ao amin'ny tanànan'i Neikeng dia nampiditra fa tao anatin'ny 40 taona nisian'ny fanavaozana sy ny fanokafana, Neikeng dia namorona lamina fampandrosoana ny "kiraro atsinanana sy ny porcelain andrefana", ary lasa indostrian'ny andry nentim-paharazana ny kapa. Nanomboka tamin'ny 1980, anatinyTanànan'i Neikeng Nandalo lalana niavaka avy amin'ny haizina mankany amin'ny laza maneran-tany ny slippers, ary namorona tsikelikely vondrona indostrialy lehibe. “Ny anaran'ny 'Shin's Shoe Calavakaal · Slippers Famous Town' dia mifantoka amin'ny fizarana kiraro ary hampiroborobo ny fampandrosoana tsara kokoa amin'ity fizarana ity".
"Tao anatin'ny taona 70 sy 80 ny slippers tao amin'ny Tanànan'i Neikeng amidy indrindra amin'ny tsena anatiny, hanafaingana ny fampandrosoana ny orinasa tsy miankina amin'ny taona 90, mihamaro ny orinasa handray anjara amin'ny tsenan'i Canton, ny Tanànan'i Neikeng slippers dia nanomboka ny baikony tamin'ny alalan'ny orinasa varotra vahiny, ho any amin'ny orinasa taty aoriana ny arisiva misokatra vavany manerana izao tontolo izao, izany dia tena nitondra tao anatin'ny Tanànan'i Neikeng kapa manerana izao tontolo izao.” Ao amin'nyTanànan'i Neikeng ny taranaka taloha mpanamboatra kapa Atoa Zhang nahatsiaro, koa tamin'izany fotoana izany, tao amin'ny Tanànan'i Neikeng kiraro indostrian'ny mizana mba hanitatra bebe kokoa, ny isan'ny orinasa mitombo, sehatra miroborobo, niforona tao amin'ny Tanànan'i Neikeng slippers varotra any ivelany indrindra, nampian'ny fivarotana an-toerana ny endri-javatra lehibe.
Taorian'ny 40 taona nivoatra, ny Tanànan'i Neikeng Ny kapa dia nivoaka tsikelikely avy amin'ny fomba famokarana indostrian'ny trano fonenana, miaraka amin'ny famaritana, manomboka amin'ny famolavolana, ny fampandrosoana, ny famokarana bobongolo, ny famatsiana akora ho amin'ny famokarana, ny fonosana, ny varotra, ny orinasa, ny lozisialy sy ny sisa tsirairay mampifandray ny rojo indostrialy feno, mazava tsara ny fizarana asa matihanina, miavaka ny fahaiza-miara-miasa, mivelatra tsy an-kijanona.
Voalaza fa maherin’ny 590 ny orinasam-pamokarana misoratra anarana ao Jinjiang, miaraka amin'ny vokatra isan-taona mihoatra ny 700 tapitrisa tsiroaroa ary ny totalin'ny sandan'ny vokatra mihoatra ny 10 lavitrisa yuan. Anisan'izany, ny Output sanda mihoatra ny 100 tapitrisa yuan orinasa, 22 orinasa, Output sanda mihoatra ny 5 lavitrisa yuan tamin'ny 2017, vokatra dia aondrana any Etazonia, Vietnam, Filipina, India, Afrika Atsimo, Eoropa Andrefana, Afovoany Atsinanana sy ny faritra hafa, dia fototra famokarana kapa nasionaly.
“Ny fanekena ny Jinjiang Ny tanànan'i Neikeng slippers dia tsy ny fankatoavana ny fivoaran'ny indostrian'ny slippers tao anatin'ny folo taona lasa ihany, fa koa ny fanombohana vaovao ho an'ny fampandrosoana indostrialy. Miorina amin'ny tanàna malaza slippers, fambolena lalina sy asa amim-pitandremana, fenitra hentitra sy fepetra ambony, ny anatiny.Tanànan'i Neikeng Ny indostrian'ny slippers dia azo antoka fa miala amin'ny vokatra malaza sy orinasa malaza ary tanàna amin'ny lalana cluster indostrialy. " "Hoy i Wang Wenqi, filohan'ny The China Leather and Shoe Industry Research Institute (Jinjiang) Co., LTD.
Ahoana no hatao Jinjiang indostrian'ny slippers manao "hazo tranainy" manokatra "voninkazo vaovao"?
Ny voninahitry ny "Tanànan'ny kiraro sy ny tanànan'ny kiraro malaza any Shina" dia manome fahatokisana ny orinasa indostrian'ny kapa, fa koa mahatonga azy ireo hahatsapa fa ilaina sy maika ny fanovana sy ny fanavaozana. tsy azo lavina,Jinjiang Tanànan'i Neikeng Ny indostrian'ny slipper dia miatrika faritra famokarana slipper an-trano hafa toy ny fifaninanana homogenized, ady amin'ny vidiny, fanangonam-bolo, fikorontanan'ny rafitry ny asa ary olana hafa mitovy amin'izany. Jinjiang Tanànan'i Neikeng orinasa slipper ny fomba "hazo tranainy" manokatra "voninkazo vaovao"?
Dr. Qin Ge, mpiara-miombon'antoka amin'ny toeram-pandinihana manokana izay nitsidika ny atitany Tanànan'i Neikeng orinasa slippers, nilaza tamin'ny mpanao gazety fa raha oharina amin'ny Brezila sy ny hafa matanjaka kapa, ny anatiny Tanànan'i Neikeng Ny indostrian'ny slippers dia manana toerana malalaka ho an'ny fampandrosoana. “Ny anatinyTanànan'i Neikeng Ny orinasa slippers dia kely sy miparitaka, tsy misy orinasa lehibe eo amin'ny faritra, ary tsy misongadina tanteraka ny fiantraikan'ny agglomeration indostrialy. Ankoatr'izay, mbola misy toerana be dia be ho an'ny fanatsarana ny fampandehanana marika, ny fisainana famolavolana ary ny fitantanana. "
Betsaka ny orinasa slipper mihitsy no mitady modely fampandrosoana vaovao. Ohatra,SASANY Shoes orinasa manizingizina amin'ny r&d sy ny fanavaozana amin'ny akora fototra, manatsara ny teknolojia ary manova tsy tapaka ny fahombiazan'ny akora PVC, izay mampihena be ny vidin'ny orinasa. Eken’ny tsena ny fampiononana, ny fiarovana ary ny halemem-panahin’ny kapa novokarin’ny akorany. SASANY Shoes orinasas dia hisamborana ny tsena sy ny teknolojia avo lenta, mifantoka amin'ny kiraro avo lenta ivelany, ny fanavaozana ny vokatra feno fahasahiana, ny fanatsarana ny teknolojia ary ny fanavaozana ny fitaovana, avy amin'ny lalana fampandrosoana miavaka; Etsy ankilany,SASANY Shoes orinasa nifantoka tamin'ny fanaraha-maso ny rohy fivarotana sy ny fampandehanana tsara ny vola. Manizingizina amin'ny fifampiraharahana amin'ny vola izy io, mahavita "mividy ambany ary mivarotra ambany", mividy akora amin'ny vidiny mora, mivarotra kiraro vita amin'ny vidiny ambany kokoa noho ny tsena, ary mibodo ny tombony amin'ny vidiny raha misy tombony ary manao fifaninanana ara-pahasalamana.
Ny orinasa Neikeng slippers dia mahatsapa ihany koa fa ny orinasa dia "mandeha irery", "olona iray mandeha eran'izao tontolo izao", orinasa vitsivitsy ihany no mamakivaky ny indostria dia tsy afaka mitondra fiovana lehibe. Ahoana no handrava? Noho izany,Jinjiang governemanta sy ny fiaraha-miasa amin'ny orinasa, ny fampandrosoana ny vondrona orinasa, mba hiala amin'ny toe-javatra vaovao ny indostria.
Mba hampandrosoana tsara kokoa ny indostrian'ny slippers, NEikeng Town ihany koa dia nanolotra ny fampiharana feno ny tetikasa "enina voalohany", dia ny fananganana zaridaina indostrialy, fananganana tsena matihanina, fananganana sehatra Internet, fananganana vondron'orinasa fikarohana siantifika, fananganana vondrona mpitarika. orinasa, mba hanorina vondrona vokatra malaza, Ary hijery ny fampiharana ny "fikambanana + famokarana fototra + tsena matihanina" fampandrosoana fomba.
Vondrona fanombanana: Jinjiang Ny kapa dia manana tombony amin'ny fifaninanana amin'ny tsena
“Mino izany ny ekipan’ny mpandinika NEikeng Town in Jinjiang dia nanasongadina ny tombony amin'ny indostrian'ny slipper, miaraka amin'ny rojo indostrialy feno ary tontolo iainana fampandrosoana tsy tapaka. Miaraka amin'ny ezaka iraisan'ny governemanta, ny fikambanan'ny indostria ary ny orinasa, ny tanànan'i Neikeng dia nivoatra ho iray amin'ireo toby famokarana slipper lehibe indrindra any Shina. Ity ny fanombanana feno nyJinjiang anaty Tanànan'i Neikeng nomen'ny ekipa mpanao fanombanana amin'ny alalan'ny fitsidihana, fanadihadiana, fanadihadiana, fivoriana, fifanakalozan-kevitra ary rohy hafa.
Mpitati-baovao momba ny fenitry ny fanombanana ny vondrona mpampiantrano, Jinjiang kapa amin'ny tombontsoam-pirenena, ary koa ny fampandrosoana ny Jinjiang soso-kevitra indostrian'ny slippers sy olana hafa, ny mpitarika ny vondrona FNy sekretera jeneralin'ny fikambanan'ny indostrian'ny kiraro ao amin'ny faritany ujian Li Jun tafatafa.
Jinjiang Vaovao ara-toekarena: avy amin'ny lafiny inona no tena manombantombana ny vondrona mpanao fanombanana Jinjiang kiraro?
Li Jun: Ny kluster indostrialy dia manondro ny fivondronan'ny orinasa maro sy ny vondrona mifandraika amin'ny endri-javatra sasany amin'ny faritra iray, misy fiantraikany mibaribary, fiasa feno ary serivisy feno. Ampifandraisinay amin'ny sehatra ara-toekarena sy ny fampandrosoana ankapoben'ny indostria ny zava-dehibe indrindra. Ny rafitry ny rojo indostrialyJinjiang anaty Tanànan'i Neikeng, ny ampahany amin'ny tsenan'ny vokatra eto an-toerana sy any ivelany, ny fananganana sehatra serivisy ho an'ny daholobe sy ny refy hafa dia ao anatin'ny sehatry ny fanombanana ihany koa.
Mazava ho azy, ny indostrian'ny fampandrosoana maharitra, ny indostriany, ny fanavaozana sy ny fampandrosoana ny orinasa, ny marika kalitao, ny famokarana marani-tsaina, ny famokarana cluster, ny famokarana serivisy, ny fanofanana ny mpiasa, ny fanatsarana ny indostria, ny fampidirana indostrialy-tanàna ary ny lafiny hafa amin'ny toe-javatra, dia handinika ihany koa isika. amin'ny ho avy dia misy fe-potoana azo antenaina. izao,NEikeng slippers indostria dia tena namorona tombony valo, toy ny ambaratonga, vokatra, fitaterana faritra, mekanika, marika, tsena, fiarovana ny tontolo iainana sy ny fanavaozana. Inoana fa ny asa lalina sy marim-pototra mitohy dia mety hitarika ho amin'ny vondron'orinasa indostrialy misy vokatra malaza, orinasa malaza ary tanàna malaza.
Jinjiang Vaovao ara-toekarena: raha ampitahaina amin'ireo faritra mpamokatra slipo hafa any Shina, inona no toetra sy tombony Jinjiang manana slipper?
Li Jun: Ny toetra lehibe indrindra amin'ny Jinjiang slippers dia ny vokatra dia manan-karena amin'ny endrika, isan-karazany sy ny kalitao. Ny vokatra dia mety ho Japon, Eoropa, firenena sasany tian'ny mpanjifa, dia mampiseho izanyJinjiang kiraro vokatra manana tombony sy ny fifaninanana. Mazava ho azy fa io tombony io ihany koa no tokony hisolo tena amin'izao fotoana izao. Ny orinasa dia tokony hanao vokatra tsara, vokatra marefo, vokatra avo lenta, mba hanovana ny fahatsapana ambany ambany amin'ny famokarana sinoa.
Hatramin'ny taona 1998, Jinjiang dia nomena anarana hoe "Shoe Calavakaal of China", izay manana teknolojia fanaovana kiraro matotra sy rojo indostrialy, izay hevi-dehibe izay itiavan'ny China Leather Association amin'ny fampandrosoana ho avy. Jinjiang indostrian'ny slipper, ary izany ihany koa no tombony izay tsy ananan'ny faritra mpamokatra slipper hafa. Mandritra izany fotoana izany,Mny olona innan tia miady sy sahy mahazo ny fanahy dia lalina ao amin`ny taolana, dia sarobidy, mino aho fa amin`ny fisian`ny fanahy io, Jinjiang indostrian'ny kapa dia afaka manome antsika tsy ampoizina bebe kokoa.
Jinjiang Vaovao ara-toekarena: Inona no soso-kevitra omen'ny ekipa mpanao fanombanana amin'ny fampandrosoana ho avy Jinjiang indostrian'ny slipper?
Li: ny vokatra dia mbola fototry ny zava-drehetra, tsy misaraka amin'ny fikarohana sy ny fampandrosoana sy ny famolavolana ny vokatra, ary manantena ny Jinjiang Ny indostrian'ny kapa dia afaka mampitombo ny fampiasam-bola amin'ny fikarohana sy ny fampandrosoana ny vokatra, amin'ny alàlan'ny fitaovana vaovao miasa, ny teknolojia vaovao sy ny fanavaozana, hampiroborobo ny hasarobidin'ny vokatra, fanamafisana ny fananganana ekipa famolavolana, ny fampidirana na fanofanana talenta famolavolana matihanina, ny fitomboan'ny fampiasana loharanon-drafitra mifandraika amin'izany.
Ny fampandrosoana maitso sy maharitra ihany no afaka mitondra tanjaka vaovao ho an'ny indostria iray. Jinjiang Ny indostrian'ny slipper dia mila manafaingana ny fananganana rafitra manara-penitra, manamafy ny fanaraha-maso ny kalitaon'ny vokatra, manatsara hatrany ny rafitra famokarana maitso, ary mamorona rojo indostrian'ny famokarana maitso. Mandritra izany fotoana izany,Jinjiang afaka manafaingana ny drafitra ny slippers valan-javaboary indostrialy, hanafaingana bebe kokoa ny indostria fiovana sy ny fanavaozana, ary mavitrika hampiroborobo ny fanitsiana ny indostria rafitra.